Iwe Unogona Kuda Email Kushambadzira Nyanzvi Kana ...
Chishanu, January 8, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Scott Hardigree
Iyi posvo inoitirwa kuve sosi kune avo, vanobvumwa, vanoziva kuti vanogona kunge vachiwana kukosha kwakanyanya kubva kuemail chiteshi. Hazvina mhosva kana ukasarudza kuhaya vekunze nyanzvi, senge email kushambadzira agency, kana tarenda remumba; iri gwaro rinokubatsira iwe kuongorora uye kuongorora zvakare ako aripo emaemail ekushambadzira.
Email yave iri yekushambadza workhorse kwemakumi gumi, uye izvo hazvigoneke kuchinja munguva pfupi iri kutevera. Iyo inobvumira kunongedzwa nekuti data rinotyairwa. Inotyaira yakananga kutengesa. Inovaka hukama, kuvimbika uye kuvimba. Iyo zvakare inotsigira kutengesa kuburikidza nedzimwe nzira chaidzo:
Maererano Direct Kushambadzira Association, email kushambadzira kwakaburitsa ROI ye $ 43.62 yedhora rega rega rakashandiswa pairi, zvakapetwa kaviri pane iyo yekutanga kumhanya.
Pfupiso na KushambadziraSherpa inoti, Avo vanoona kushanda kwemapurogiramu avo emaimeri kuderera vane mukana wakakura wekuve nemaonero mapfupi ehurongwa pamusoro pemaitiro. Masangano ane maonero-ekutsvaga mari eemail anokohwa mibairo
The CMO Kanzuru'S Kushambadzira Outlook '08 Chirevo chakaongorora zvirongwa pamwe nemaonero evashambadzi mazana matanhatu nemakumi mashanu. Email kushambadzira ndiyo yaive yepamusoro nzvimbo yekudyara.
Mune ongororo yevatengesi, Shop.org akataura kuti "E-mail ndiyo inonyanya kutaurwa nzira yakabudirira pazvese".
Bata Email Kushambadzira-Mumba?
Kana iwe usina hukama huripo hwevamiririri kana uine tarenda remumba, funga izvi:
Iwe (zvichireva kuti iwe kana timu yako) munoziva bhizinesi rako; iwe zvakare unoziva mushe mukutengesa email?
Kana hongu, une here nguva nesimba rekukwidziridza iko kuedza?
Kushambadzira kwako kwakabatana uye CRM kunoenzanisa sei nevanokwikwidza?
Iko yako email kushambadzira kutyaira kutengesa, kuvaka kuvimbika, uye kudzikisa kushambadzira mutengo?
Yako email chirongwa chakavakirwa pakutsvaga uye / kana nhoroondo dhata
Basa rako repamba rino chengetedza kana kukudyira mari?
Kana iwe uchitova nesangano rekushambadzira kana rumwe rubatsiro rwekunze, zvibvunze:
Ivo vanoisa hunyanzvi muemail kana ivo vari basa rakazara?
Ivo vanogadzira iyo ROI iri in-mutsetse nezvakawanikwa pamusoro?
Vanofunga nezvedu vasina kumanikidzwa here?
Ivo vanonzwisisa yedu inotariswa musika uye bhizinesi maitiro?
Vakaongorora nekuita mari sarudzo dzese here?
Basa ravo ndere nyowani, rinonakidza, uye rinoratidzira maitiro akanakisa?
Zvimedu zveEmail Kushambadzira Kuenzanisa
Email kushambadzira kunogona kusanganisira kuwanikwa kwevatengi, kutungamira kwekurera, kugadzirisa kwevatengi uye kuchengetedza, uyezve nekutengesa kwakananga, zvinoreva kuti kuwanda kwemaitiro uye masevhisi anogona kuve anosanganisira, kusanganisira:
Sarudzo & Tsvagiridzo
Edhisheni & Yekusimudzira Kuronga
Kopa Kunyora & Zvemukati Kuvandudza
Dhizaini & Kodhi
Nyora Kukura & Nharaunda Kuvaka
Rondedzero Segmentation & Rondedzero Yekusimudzira
Maitiro & Kwevatengi Kufaira
Kuendesa Meseji & Kuendesa Kuongorora
Email Service Provider (ESP) kana In-imba Mailing Solution Kuongorora
Tungamira Kurera & Direct / Kumusoro / Muchinjikwa Kutengesa
Multivariate Kuyedza & Kugadziridza Chirongwa
Kana rondedzero iri pamusoro ichisanganisira kupfuura zvauri kuita, ichi chingave chiratidzo chakasimba chekuti urikushandisa chiteshi ichi chinopa mari. Pamwe inguva yemutsva wekushambadzira mudiwa kana kuti pamwe unofanirwa kuendesa mabhajeti uye / kana kupa yako iri-mukati timu kudzidziswa kwakawanda?
Kana iwe (zviri pamutemo) wakatsunga kuti unoda rubatsiro, ramba wakatarisana. Muchikamu chechipiri uye chekupedzisira tichakurukura MAZANO ekuti uwane nekuyera tarenda rinokodzera rinoenderana nezvinodiwa zvako zvakasiyana uye rinosangana nezvirambidzo zvako zvebhajeti
Tags: cmo kanzurucrm kusanganayakananga marekting kushamwaridzanaemail nekutengesaemail crmemail kusanganaEmail MarketingEmail Kushambadzira Agencytsambambozha kushambadza nyanzviemail kushambadzira kudzoka pane investmentemail optimizationemail roiKushambadziraSherpachitoroshop.org
Ndira 8, 2010 na3: 10 PM
Scott - ichi ndicho chinyorwa changu chandinofarira kusvika nhasi. Anotyisa kuraira! Makambani mazhinji saka anorwira zviwanikwa zvavanazvo uye havakwanisi kusvika pane zvavanogona Ndipo apo kudyidzana nenyanzvi kunogara kuri sarudzo huru!
Ndira 8, 2010 na3: 41 PM
Ndatenda Doug! Muchikamu chechipiri ini ndichataura misimboti misere yekutungamira yekuhaya nyanzvi yekutengesa email.